Outlook Express Mmezi Ngwá Ọrụ. Outlook Express Idozi Software.
Gịnị mere DataNumen Outlook Express Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke ihe Outlook Express data mgbake ngwaahịa. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Outlook Express Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Outlook Express Repair na-ese anwụrụ mpi
Ntughari akwukwo na oru weputa
N'ikpeazụ - ngwaahịa nke na-eme ihe ọ na-ekwu na-enweghị ụzọ ọ bụla na-enweghị isi na nsonaazụ dị egwu. Ị mere nke ọma! Achọrọ m ịchọta ngwaahịa gị tupu oge ahụ
Obi dị m ụtọ na m nwere faịlụ dbx niile na nkwado site na Nov 19th na ndị ọzọ niile bụ
Ejiri ụdị ngosi nke DOER -
Azụrụ m DataNumen Outlook Express Repair ma nwetakwa nke ọma na faịlị na folda m nwere nke tufuru na ndepụta OE m. Gị
Ngwọta Akaụntụ Manager Express Express
Ewezuga ihe ntakịrị,
Enwere m lost ozi-e ndị dị mkpa n'oge usoro mgbakọ ahụ amaghịkwa otu esi achọta ha ma ọ bụ meghee ha. Ngwaahịa gị kpebiri nsogbu ahụ
Main Akụkụ na DataNumen Outlook Express Repair v2.5
Nkwado iji weghachite Outlook Express 4 mbx faịlụ na Outlook Express 5/6 dbx faịlụ.
Nkwado iji weghachite dbx faịlụ na MBX faịlụ na mgbasa ozi rụrụ arụ, dịka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi otu dbx faịlụ na mbx faịlụ.
Nkwado iji dozie dbx na mbx faịlụ ruo 4GB, yabụ ọ nwere ike idozi dbx faịlụ na nsogbu 2GB.
Nkwado iji weghachite Outlook Express data site na temporary .dbt faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ dbx ma ọ bụ mbx faịlụ ka emezie na kọmputa mpaghara.
Nkwado mwekota na Windows Explorer, n'ihi ya, ị nwere ike ịrụzi dbx faịlụ na onodu menu nke Windows Explorer mfe.
Nkwado usoro iwu (DOS ozugbo) oke, yabụ ị nwere ike ịkpọku DOER site na mmemme gị.
iji DataNumen Outlook Express Repair iji gbakee Outlook Express ozi-
Outlook Express echekwa ozi ịntanetị niile na faịlụ .dbx. Dịka ọmụmaatụ, faịlụ Inbox.dbx nwere ozi ịntanetị na Igbe mbata, faịlụ Outbox.dbx nwere ozi ịntanetị na Outbox, wdg.
Ọ bụrụ na faịlụ .dbx rụrụ arụ ma ị nweghị ike ịnweta ozi ịntanetị dị na ya, ịnwere ike iji DataNumen Outlook Express Repair iji weghachite ozi ịntanetị gị na ya. The natara ozi ịntanetị na-echekwa dị ka .eml faịlụ nke nwere ike mfe ibubata azụ Outlook Express.
Chọta faịlụ rụrụ arụ .dbx ma ọ bụ .mbx ịrụzi ma ọ bụrụ na ịmebeghị.
Cheta na: Tupu imezi faịlụ dbx rụrụ arụ ma ọ bụ mbx DataNumen Outlook Express Repair, biko mechie Outlook Express na ngwa ọ bụla ọzọ nwere ike gbanwee faịlụ ahụ.
Họrọ faịlụ dbx rụrụ arụ ma ọ bụ mbx ka emebiri emebi:
Nwere ike itinye dbx ma ọ bụ mbx filename ozugbo ma ọ bụ pịa bọtịnụ na-agagharị na họrọ faịlụ. I nwekwara ike pịa bọtịnụ chọta dbx ma ọ bụ mbx faịlụ ka emezi na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen Outlook Express Repair ga-weputa niile natara ozi na ndekọ na xxxx_recovered, ebe xxxx bụ aha rụrụ arụ dbx ma ọ bụ mbx faịlụ. Ọmụmaatụ, maka faịlụ Inbox.dbx, ndabara mmepụta ndekọ ga-Inbox_recovered. Ọ bụrụ n’ịchọrọ iji ndekọ ọzọ, biko họrọzie ya otu a:
Pịa bọtịnụ, DataNumen Outlook Express Repair ga start na-agbake ozi site na dbx ma obu mbx rụrụ arụ. Ogwe ọganihu
Mgbe usoro mmezi ahụ, ọ bụrụ na enwetaghachila ozi ọ bụla na dbx ma ọ bụ mbx faịlụ nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
DataNumen Outlook Express Repair 2.5 weputara na Disemba 24th, 2020
DataNumen Outlook Express Repair A na-ahapụ 2.3 na November 9th, 2020
DataNumen Outlook Express Repair A tọhapụrụ 2.2 na Septemba 28, 2013
DataNumen Outlook Express Repair 2.0 wepụtara na Jenụwarị 29, 2009
DataNumen Outlook Express Repair A tọhapụrụ 1.5 na Dec 6, 2006